အချစ်ရေး | ဒီပကျော်(နည်းပညာ) | Page 16
May 24, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
လူတိုင်းဟာ လိင်ကိစ္စမှာ သူတို့ ပါတနာတွေကို ကောင်းစေချင်ကြတာချည်းပါ။ အခု ဒီဟာကို ဖတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ မှန်ကန်တဲ့ ဘက်ကို ခြေတစ်လှမ်း လှည့်လာတာပါပဲ။ ဒီစာထဲမှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိင်ကိစ္စ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် တစ်ယောက်က သင် မှားနေလောက်တဲ့ အရာတွေကို ရှာဖွေပေးပြီး ပြင်ဆင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်က လိင်အကြောင်း တစ်နေ့လုံး စဉ်းစားနေပြီး အိမ်ရောက်တော့ တန်းဆက်ဆံချင်ပါတယ်။ သူမရတော့ အလုပ်ထဲကို စိတ်ရောက်နေပါတယ်။ သူမကို သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်မပေးရင် သူမ ပျော်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူမကို အမြဲ အစပျိုးပေးတာ လုပ်ပေးပါ။ မိန်းမတွေအတွက် လိင်ကိစ္စမှာ စိတ်က အရေးကြီးဆုံးပါ။ သူတို့ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ နွှေးပေးဖို့ လိုပါတယ်။
လိင်အရမ်း ဆက်ဆံချင်နေလို့ သူမရဲ့ ပန်းဖူးလေးကို တစ်ချက် နှစ်ချက် ပွတ်ပေးပြီးတာနဲ့ ထည့်လိုက်ပါတယ်။ သူမကို နွှေးပေးဖို့ လိုနေလို့ သူမက လိင်ဆက်ဆံမှု အရသာကို ကောင်းကောင်း ခံစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ဆုံး သူမကို ဘာဂျာ ကောင်းကောင်း ကိုင်ပေးဖို့ သတိရပေးပါ။
တစ်ခုခုမှားသွားမှာ စိုးလို့ သင် ကြားဖူးတဲ့ ပုံစံအသစ်ကို စမ်းမကြည့်မိတာမျိုး ရှိပါသလား။ အမြဲ Missionary နဲ့ Doggy နဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားနေရပါသလား။ အဲဒီအကြောက်တရားတွေကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါ။ မှားယွင်းတာဟာ ဘာမှမလုပ်တာထက်တော့ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ သင့်ပါတနာက ဒီပုံစံကြီးနဲ့ နေ့တိုင်း သွားနေမယ့်အစား အသစ်အဆန်းတွေ လုပ်ရတာ ပျော်ပါလိမ့်မယ်။
သင်က လိင်ကိစ္စဆိုတာ သင့်အတွက် ကောင်းအောင် လုပ်ရတာပဲ ထင်နေပါတယ်။ သူမ ပြီးရင် သင် ဆက်ဆံရတာ ပိုစိတ်ပါပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူမကို ပြီးအောင် အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ သူမက မပြီးပဲ ပြီးချင်ယောင် ဆောင်တတ်လာပါတယ်။ အဲဒီလို မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်တဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ ပါတနာ ဘာလိုချင်လဲဆိုတာကို သိနေပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ အမြဲ စုံစမ်းနေတတ်ပါတယ်။
သင်က မိန်းမတိုင်းကို ဒီဖော်မြူလာနဲ့ချည် ချဉ်းကပ်ပါတယ်။ မိန်းမတိုင်း ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် ပြီးမှာပဲဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ချဉ်းကပ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မိန်းမတိုင်းဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။ ချဉ်းကပ်နည်းလဲ အမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ်။ သင် ဆက်ဆံခါနီးတိုင်း သူမကြိုက်တဲ့ အရာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးသင့်ပါတယ်။
အိပ်ရာထဲမှာ အသံသိပ်မကျယ်တဲ့ မိန်းမတွေ ရှိပေမယ့် ဘာသံမှ မထွက်တာကတော့ သူမ မကြိုက်ဘူးဆိုတာရယ်၊ အသံထွက်ရလောက်အောင် မကောင်းဘူးဆိုတာရယ်ကို ပြတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မစခင်မှာ သူမ အသံထွက်ရင်၊ ညည်းရင် သင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာ ပြောပြထားသင့်ပါတယ်။ ဆက်ဆံစဉ်လဲ ကောင်းလား ကောင်းလား မမေးပဲ သင် ကြိုက်တဲ့ အပိုင်းလေးတွေ ပြောပြပြီး အဲဒီနေရာတွေမှာ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင် သူမ ပိုကြိုက်သွားမလဲဆိုတာ မေးကြည့်ပါ။
သင် သူမကို ထိလိုက်တာနဲ့ Pornstar တစ်ယောက်လို အော်ဟစ်နေရင်တော့ သရုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို သင့်ကို ပိုအားရှိစေဖို့နဲ့ သူတို့ မပြီးဆုံးနိုင်တာကို ကာကွယ်ဖို့ လုပ်နေကြတာပါ။ သူမကို အဲဒီလို အော်တာ သင့်ကို စိတ်တက်ကြွစေပေမယ့် ဘယ်အရာတွေက သူမအတွက် အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာ သင်သိသင့်တယ်လို့ ပြောကြည့်ပေးပါ။
၉. သင့် လိင်တံ ပြသနာကို ပြောမပြပါဘူး
အဲဒါဟာ အိပ်ရာထဲမှာ အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်ပြီး သူမက သင်မပြောလဲ သိမှာပါ။ ပန်းသေပန်းညှိုး၊ အချိန်မတိုင်မီ သုတ်လွှတ်ခြင်းတွေ ဖြစ်ရင် သင့်ကောင်မလေးကို ပြောပြထားသင့်ပါတယ်။ သင်က အဲဒါကို ကုနေတယ်ဆိုတာလဲ ပြောပြထားပါ။ သူမ သည်းခံပါလိမ့်မယ်။ သူမကို ပြီးအောင်လဲ လက်နဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပါးစပ်နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
၁၀. သူမက ဘယ်တော့မှ မပြီးပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သင်လဲ သင်ပြီးတာနဲ့ ဆက်ဆံတာ ရပ်လိုက်ပါတယ်
အရင်ဆုံး သူမကို ပြီးကို ပြီးအောင် လုပ်ပေးပါ။ ယောက်ျားတော်တော်များများဟာ သူတို့ပြီးတာနဲ့ မိန်းမလုပ်သူက ဘာမှ မပြောရင် ဟိုဘက်လှည့်ပြီး အိပ်ဖို့ မီးစိမ်းပြတာလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ သင် သူမ ပြီးတာ မတွေ့ရင် သူမ မပြီးပါဘူး။ သူမ မပြီးတာကို ဂရုမစိုက်ရင်တော့ သင် ပြသနာ အကြီးကြီး တက်ပါပြီ။ သင် ပြီးရင်တောင် သူမကို ပြီးစေဖို့ ပါးစပ်၊ လက်၊ Sex Toy ဘယ်ဟာနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ပေးပါ။
May 23, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
May 22, 2016 dpakyaw	2 Comments
ယောင်္ကျားလေးတွေက မိန်းကလေးကို ကျောင်းသူဝတ်စုံဝတ်ခိုင်းပြီး အတူနေရတာကို သဘောကျသလိုပါပဲ။ မိန်းကလေးတွေကလည်း စာကြည့်မျက်မှန်တပ်ထားတဲ့ ပါမောက္ခစတိုင်ကို တောင့်တတတ်ကြပါတယ်။ ကိုင်းထူထူနဲ့ မျက်မှန်တွေက ယောင်္ကျားပီသပြီး အသိဉာဏ်ကြွယ်ဝတဲ့ စတိုင်ကိုဖြစ်စေတာကြောင့် အတူနေချိန်အတွင်းမှာ ပိုပြီး စိတ်ကြွစေလို့ဖြစ်ပါတယ်
အတူနေတဲ့အချိန်မှာ ယောင်္ကျားလေးရဲ့ဆံပင်ကို ဆွဲရတာကို အကြိုက်တွေ့တတ်ကြပါသေးတယ်။ ဆံပင်ကို ဆွဲကိုင်တဲ့အခါမှာလည်း ဘာမှမလိမ်းကျန်ထားတာကိုမျိုးကို ပိုသဘောကျကြပါတယ်
ယောက်ျားကောင်းတွေ လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာ ၁၀ ခု
May 22, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
ကျွန်တော် အရင်က ယောက်ျားတွေ ချစ်သူမပေါ်မှာ လုပ်ပေးသင့်တဲ့ အရာတွေအကြောင်း ဆောင်းပါးတွေ ရေးတုန်းက ခုခေတ်မှာ ဒီလိုတွေ မလုပ်ကြတော့ဘူးဆိုပြီး ပြန်လှန်ပြောတဲ့ လူတွေ ရှိကြပါတယ်။
ပြောရရင် ” ယောက်ျားကောင်း” တွေပဲ အဲဒီလို ပြုမူဆက်ဆံတာပါ။ တကယ်လို့ သင့်မှာ အဲဒီ အမူအကျင့်တွေ မရှိရင်တော့ ယောက်ျားကောင်း ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားဖို့ လိုသေးလို့ပါပဲ။ တခြားဘက်ကကြည့်ပြီး လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာတွေကတော့
၁. သူမရဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကို ဘယ်တော့မှ အပြစ်မပြောပါနဲ့
” ဆံပင်လေး နည်းနည်းသာ ရှည်လိုက်ရင်” ” ပေါင်လေး နည်းနည်းသာ ကျသွားရင်” ယောက်ျားကောင်းဆိုတာ သင့်ရုပ်ရည်နဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သင့်ကို နာကျင်အောင် ပြောမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုပြောတတ်လုပ်တတ်သူတွေဟာ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ယုံကြည်စိတ်ကို လျော့နည်းသွားစေပြီး သူ့ကို မှီခိုစေလိုသူတွေပါ။
၂. သူမရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို မနှောင့်ယှက်ပါနဲ့
ချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ခုမှာ ဘာကိုမှ ဖုံးကွယ်ထားစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ သင့်ရဲ့ပါတနာ ဖုန်းကို ခဏထားခဲ့တိုင်း ခိုးကြည့်စပ်စုလို့ ရတယ် မဆိုလိုပါဘူး။ အဲဒီလို ခိုးကြည့်သူတွေဟာ သူတို့ဘာသာ လုံခြုံမှု မရှိပဲ သူတို့ပြသနာတွေကို သင့်အပေါ် ထိုးချချင်သူတွေပါ။
၃. သူမကို ဘယ်တော့မှ စိတ်ဓာတ် မကျပါစေနဲ့
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုဟာ သူ တခြားသူတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကို ဘယ်လောက် အားပေးလဲဆိုတာနဲ့ တိုင်းတာလို့ရပါတယ်။ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဘေးက လူအားလုံးကို ကူညီအားပေးဖို့ အသင့်ရှိနေပြီး ဘယ်တော့မှ စိတ်ဓာတ် မကျစေပါဘူး။
၄. သူမရဲ့ တန်ဖိုးကို သိထားပါ
သင့်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သင့်ရဲ့ ပါတနာအပေါ် သက်သေပြဖို့ လိုပြီလို့ သိလိုက်တဲ့ ခဏဟာ လမ်းခွဲဖို့ အချိန်ပါပဲ။ ချစ်သူတစ်ယောက်ဟာ သင့်ရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ သင့်ကို အရှိအတိုင်း လက်ခံလို့ သင့်အနားမှာ နေတာပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သင် ဘာလုပ်လို့၊ သူတို့ကို ဘာပေးလို့ ရှိနေတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
၅. သူမကို နောက်ပိုင်း ပို့မထားပါနဲ့
ချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဆိုတာ လူနှစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝတွေ ပေါင်းစည်းသွားတာပါ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်မှာ တစ်ကိုယ်ရည် အပန်းဖြေချိန် ရှိပေမယ့် သင့်ချစ်သူကိုလဲ သင့် အချိန်ဇယားရဲ့ ထိပ်ပိုင်းမှာ နေရာပေးထားသင့်ပါတယ်။ သင့်အိမ်အပြန်ကို သူစောင့်နေရတဲ့အချိန်က တူတူရှိတဲ့ အချိန်ထက် များတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
၆. သူမကို အထီးမကျန်ပါစေနဲ့
ချစ်ဇာတ်လမ်းဆိုတာ နှစ်လမ်းသွားတွေ ဖြစ်ရမှာပါ။ လူသားတွေအတွက် စိတ်ဓာတ်ကျတတ်တာ သဘာဝပါ။ သူမ စိတ်ဓာတ်ကျချိန်တွေမှာ သင်ဟာ သူမအတွက် ရှိနေပေးရပါမယ်။ မနက်တိုင်း သူမဘေးမှာ နိုးထပေးနိုင်ရပါမယ်။
၇. သူမအပေါ် ဘယ်တော့မှ မဖောက်ပြန်ပါနဲ့
ယောက်ျားကောင်း တစ်ယောက်ဟာ ဘယ်တော့မှ ဖောက်ပြန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဖောက်ပြန်ခြင်းဟာ သူ့ရဲ့ ချစ်သူအပေါ် ပေးထားခဲ့တဲ့ ကတိစကားကို ချိုးဖောက်တာ ဖြစ်နေလို့ပါ။
၈. သူမကို ဘယ်တော့မှ မလေးမစား မပြုပါနဲ့
လွယ်ကူ ရိုးရှင်းပေမယ့် ကျော်ပြီး အကြည့်ခံရတဲ့ အရည်အချင်းလေးပါ။ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဟာ သူ့ပါတ်ဝန်းကျင်က လူအားလုံးကို လေးစားတတ်ပြီး ဘယ်တော့မှ အဆင့်အတန်း မခွဲခြားတတ်ပါဘူး။ အရည်အချင်းရှိသူဟာ တန်းတူညီမျှခြင်းကို မကြောက်ပါဘူး။
၉. သူမနဲ့ပြောရမယ့် အရေးကြီးစကားဝိုင်းတွေကို မရှောင်ပါနဲ့
မိသားစုကြားမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူကြားမှာ ဖြစ်ဖြစ် ပြသနာဆိုတာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ရှင်းမှ ပြီးမယ်ဆိုတာ ယောက်ျားကောင်းတွေ နားလည်ပါတယ်။ ပြသနာဆိုတာ ဒီတိုင်း ကြာကြာထားလေ ပိုဆိုးလေပါ။ ဘယ်အချိန်မှာ ထိန်းထားပြီး ဘယ်အချိန်မှာ ဖွင့်ထုတ်ရမလဲဆိုတာ သိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၁၀. သူမကို ဘယ်တော့မှ အနိုင်မကျင့်ပါနဲ့
အနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ အနိုင်ကျင့်တာဟာ တခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ပျက်စီးသွားစေပါတယ်။ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဟာ သူ့ထက် ဘယ်သူ့ကိုမှ နှိမ့်ချလိုစိတ် မရှိပါဘူး။
May 14, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
သူမ ဘာကြောင့် သင်နဲ့ တူတူအိပ်ရလဲ
May 10, 2016 dpakyaw	Leaveacomment
မိန်းမတိုင်းကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ကိုယ်သင် လိင်ဆွဲဆောင်မှုအား ပိုကောင်းလာအောင် ပြုပြင်နေထိုင်နိုင်တဲ့ အချက်လေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မိန်းကလေး အမြောက်အများကို စစ်တမ်း ကောက်ခဲ့ပြီး သူတို့ ဘာကြောင့် သင်နဲ့ တူတူအိပ်ရလဲဆိုတဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအချက်လေးတွေကို သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
Date တစ်ခုပြီးနောက်မှာ အိမ်ဝထိ လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ သူမ ဖိတ်ခေါ်လို့ အိပ်ခန်းထဲရောက်သွားရပြီး နောက်နေ့မနက်မှာ သူမ ကြိုက်တဲ့ သတင်းစာနဲ့ ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ သူမ ဓာတ်မတည့်တဲ့ အစားအသောက်လေးတွေကို မှတ်ထားပြီး စားသောက်ဆိုင်မှာပါ သူမအကြိုက် ပြုမူတတ်ပါတယ်။ အဲလိုလူမျိုးအနားမှာ မိန်းကလေးတွေ နေပျော်ပြီး အဲလိုလူနဲ့ အိပ်ရာဇာတ်လမ်း ခင်းချင်တတ်ကြပါတယ်။
Date အချို့ ပြီးပြီးနောက်မှာ ဇာတ်လမ်းစခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ရာပေါ်မှာ အစပျိုးတုန်းမှာ ကောင်မလေးရဲ့ မျက်လုံးကို တည့်တည့် ကြည့်ပြီး လည်ပင်းကို နမ်းပါတယ်။ ပြီးတော့ သူမရဲ့ နားနား ကပ်ပြီး ” အရမ်းလှတာပဲ” လို့ ပြောပါတယ်။ အဲလို ယောက်ျားမျိုး၊ အပြုအမူမျိုးကို မိန်းကလေးတွေ ကြိုက်တတ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ မိန်းကလေးက ခံစားရတာပါ။ ငါးရက်လောက်ပဲ သိကြသေးတဲ့ လူနှစ်ယောက်မှာ ကောင်မလေးကို ကောင်လေးက သံလိုက်နဲ့ ဆွဲငင်ထားသလို ခံစားရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကောင်မလေး သူ့အနားရောက်ရင်ကို အလိုလို လိင်ဆွဲဆောင်မှူ ခံစားနေရတာပါ။ ဒါကြောင့် ကောင်မလေးက စွန့်စားပြီး ဆက်ဆံလိုက်ပါတယ်။ ဒါကတော့ အချစ်ဆိုတာပါ။ ဖန်တီးယူလို့ မရပါဘူး။
၆. ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်ချက် မြင့်ခြင်း
“ကျွန်မဟာ လန်ဒန်ရောက်တုန်းက ဘားတစ်ခုမှာ သောက်နေတုန်းမှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်က ကျွန်မအတွက် မှာပေးပါတယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် မျက်လုံးခြင်းဆုံမိတာနဲ့ ဆက်သွယ်မိသွားကြပြီး စကားတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အပြန်မှာ သူ့အိမ် လိုက်သွားပြီး တစ်ညလုံး မနက်တိုင်အောင် ဆက်ဆံခဲ့ကြပါတယ်။ သူက ယုံကြည်ချက် အရမ်းမြင့်ပါတယ်။ သူ့အသံ၊ လှုပ်ရှုားမှု၊ ဆက်ဆံပုံတွေ၊ အားလုံးဟာ ယုံကြည်ချက် မြင့်နေပါတယ်။” လို့ ၂၇ နှစ်ရွယ် Sarah က ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ပေါ့ပ် နဲ့ R&B အဆိုတော်မလေး ရီဟားနားဟာ “Work” ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲမှာ Drake နဲ့ အတူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားမှုတွေကို ကြည့်ပြီး တစ်ချို့ က ဒီအဆိုတော် နှစ်ယောက်ရဲ့  ကြားက ပတ်သတ်မှုတွေကို သံသယ ရှိလာကြပါတယ်။
အခုတော့ အားလုံး သံသယရှိတဲ့ အတိုင်းပဲ Drake နဲ့ ရီဟားနားတို့ဟာ လျှို့ဝှက်စွာ ချစ်ကြိုက်နေကြတာ လအနည်းငယ် ရှိနေပြီလို့ PEOPLE သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားပါတယ်။
သူတို့ နှစ်ယောက်နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေ ပြောပြထားတာကတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်လုံးဟာ သူတို့ရဲ့  အချစ်ရေးကို လျှို့ ဝှက်စွာနဲ့ပဲ ဆက်လက်ရှိနေစေချင်နေကြတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလည်း လော့အိန်ဂျလိစ်က ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာ ရီဟားနားက Drake နဲ့ ချစ်ကြိုက်နေကြတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့တာကိုလည်း ပရိသတ်ထောင်ပေါင်း များစွာက မြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။
အခြား သတင်း အရင်းအမြစ်တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့တာကတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်ဟာ The Nice Guy ဆိုတဲ့ နိုက်ကလပ်တစ်ခုမှာ တစ်ညလုံး အတူတူတွဲကခဲ့ကြပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်ခင် သက်ဝင်နေတဲ့ ပုံမျိုးနဲ့ တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ PEOPLE သတင်းဌာန ကို ပြောပြလာပါတယ်။